Dheebuun dimokiraasii sadarkaa duubatti hin deebinerra ga'eera -Iskindir Naggaa - BBC News Afaan Oromoo
Dheebuun dimokiraasii sadarkaa duubatti hin deebinerra ga'eera -Iskindir Naggaa
Turtii mana hidhaa waggoota ja'aafi walakkaa booda Guraandhala darbe kan gadi dhiifame Gaazexeessaa Iskindir Naggaa, bakkaa gara gara deemuun kutaa hawwaasaa gara garaa waliin wal arguun fedhiin dimokiraasiif jiru haalaan dabaluusaa akka taajjabe dubbata.
Alaabaa seeraan alaa fayyadamtan akkasumas walga'ii eyyama malee gaggeessitan jechuun gadi lakkifamee baatii lamallee osoo hin guutiin waa'elootasaa waliinis hidhamee ture Gaazexeessaan kun.
Guyyoota kudha lama mana hidhaa erga turee ba'ees kutaa hawwaasa gara garaa daawwachuusaa dubbata Iskindir.
Sababii Labsii Yeroo Muddamaa hojiirra jiruuf yeroon bakka gara garaa deemutti of eeggannoo addaa gochuu akka qabu kan dubbatu Iskindir Naggaa, bakkawwan gara garaa hanga ammaatti deemerraa akka hubatetti dheebuun dimokiraasii kan waggoota toorba duraa caalaa dabaluusaa BBC'tti himeera.
"Uummatichi jijjiirameera, bilisummaasaatiif jedhee rasaasa dura jabinaan lakkoofsi namoota dhaabbatanii dabaleera." jechuun kan waggoota torba dura ture waliin dorgomsiisuun dubbata."Amma fedhiin dimokiraasii bifa sabummaa qabateera, beektota bira qofa ta'uurraa gara sadarkaa gadiitti mullachaa jira. Karaa biraatiinis ADWUI nillee jijjiirameera. Adeemsa jijjiiramaa keessa jira. Gaaffiin adeemsi kun karaa naga qabeessa ta'e itti fufaaf gara jeequmsaatti geessa kan jedhu yommuu ta'u kun kan paartiin biyya bulchaa jiru kallatiin taasisaa jiru waliin walqabata" jedha.
Fedhiin dimokraasii gara gadiitti bu'uunsaa jijjiiramoonni akka dhufan taasiseera
Irra deebiyee hidhamuusaa
Irkindir baatii Guraandhalaa keesa akkuma gaggeesitoota siyaasaa, gaazexeessitootaafi namoota mirga namoomaaf falman hidhaatii hiikamee torban muraasaan booda deebiyee hidhame. Kun jedha Iskindir, "saatii kamiyyu hidhamuu akka dandeenyu ergaa dabarsuuf barbaadameeti" jechuun ibsa.
Amma gara sirna dimokiraasiitti galuu hin dandeenyetti jiraachuu hin dandeenyu. Amma dimokiraasiin hin jirretti bilisummaan keenya gaaffii keessa jira," jedha Iskindir. Waa'ee Ministira Muummee Dr. Abiy AhimadGaazexeessaa Iskindir Naggaa haasawaa Ministirri Muummee Dr. Abiy Ahimad taasisan kan abdii namatti horan waan ta'aniif akka dinqisiifatu dubbachuun, namoota hedduu biratti yeroon kennamuuf akka qabu ciminaan gaafatamaa jiraachuu hubadheera jedha. "Ministirri Muummichaa waan gaarii [dubbatu] hojiitti yoo hin jijjiiramne garuu faayidaa hin qabu." Ministirri Muummichaa onnee isaaniirraa jijjiirama barbaadanillee paartiin isaanii ADWUI jijjiirama ni barbaadaa kan jedhu gaaffii ammallee deebii hin arganne," jedha."Uummanni Itoophiyaa kan qabsaa'eef akka ADWUI'n haaromu ykn jijjiiramni gaggeessitootaa jiraatuuf qofaa miti. Jijjiiramuun gaggeessitootaa kan hiika qabaatu biyyattii gara dimokiraasiitti yoo galche qofaadha," jechuun BBC'tti hime. Milkaa'inni Mnistira Muummee Dr. Abiy hojiiwwan qabatamoo ji'oota jalqabaa duraa keessa raawwataniin madaalama kan jedhu Iskindir, kunis Labsii Yeroo Muddamaa kaasuun paartilee siyaasaa hunda kan hirmaachise yaa'ii qopheessuu dabalata, jedhe.
Akka Gaazexeessaa Iskindir jedhutti Maa'ikelaawwii kan bakka yakki ciccimaan dhala namaarra itti ga'aa ture ta'uu dhaabbileen mirga nmaaf falmaniifi namoonni bakka kanatti hidhamanii turan himan cufuuf murteessuun mootummaan gara dimokiraasiitti ce'uusaa himuuf yoo ta'e malee, ofiisaatiin faayadii guddaa akka hin qabnedha. "Maa'ikelwwiin cufamuun qofti sarbamuun mirga namoomaa Itophiyaa keessatti taasifaman ni dhaabbatu jechuu miti. Gaaffiin guddaan gara sirna dimokiraasiitti seenneerraa kan jedhudha. Sarbamuun irga namoomaa guutummaan guutuutti kan dhaabbatu biyya keenya gara sirna dimokiraasiitti yoo galtedha," jedha ISkindir.